एउटी नानीले धोका दिएपछि गायक बन्न हिडें::Ranga post
सुवास कार्की गायक तथा र्यापर हुन । पछिल्लो समयका अधिकासं गितमा र्याप उनै कार्कीले दिन्छन्, कार्की जी वनेर । उनको कलालाई धेरैले मन पराएका छन् । आजको रंगपोस्टमा यि र्यापर कार्कीले छोटकरीमा आफ्नो सुरुवात् देखी आजको कार्की जीसम्मको खुड्कीला यसरी सुनाए ।
१) सुरुवातमा एउटी युवतीसँग प्रेममा परे, जतिवेला मलाई गितसंगित भन्ने थाहै थिएन । दैलेखवाट एसएलसी दिएर क्याम्पस पढ्न नेपालगन्ज झरेपछि कोहलपुरतिरकी कान्छीले तनाव दिई मेरो मन चोरेर । अनि उसले मात्रै मन चोरिन मैले पनि उसलाई आफ्नो कव्जामा ल्याईझाडें । तर समय एकैनासको कहाँ हुदोरहेछ र ? नानीले विच वाटोमा मलाई छोडेर अर्कै वाटोमा पो लागी । जव प्रेममा धोका पाए त्यसपछि गित वज्न थाल्यो मेरा मनमा । धोका पाएका र चोट पाएका गित सुन्न थालें । मन भुलाउन जे पनि गर्नुपदोरहेछ अनि त्यस्तै खालका चोट र छटपटाएका गितका शव्द पनि लेख्न थालियो । अनि सुरुवात भो एउटा महान गायक वन्ने सपना ।
२) गित गाउन सुरु गरेपछि एकैछिन गाउँछु भन्ने मात्रै भएको थियो । गितसंगितमा लागेपछि ति नानीलाई पनि भुलियो । अनि मेरो गायक वन्ने सपना त पुरा भयो तर अव कसरी राम्रो गायक वन्ने भन्ने अर्को खालको हुटहुटी सुरु भयो । पहिलो गित आत्महत्या भन्ने गाए त्यो गित निकै राम्रो भयो । कुनैवेला प्रेममा पिडा पाउँदा आत्महत्या गरौं की भन्ने सोच हुन्थ्यो जव यो गित वजारमा ल्याए धन्न मरेनछचु भन्ने पो हुन थाल्यो । अनि पहिलो गित राम्रो चलेपछि धमाधम गितहरु ल्याउन थालें । धेर्रैले मन पराए । फ्यान वढ्न थालें । अनि कार्यक्रमहरुमा जादाँ सेल्फी खिच्न आउनेहरु वढेपछि जिवनप्रति मायाँ वढ्न थाल्यो । गितसंगितमा लगाव वढ्न थाल्यो ।
३) अहिलेसम्म १ सय भन्दा धेरै गित वजारमा आईसकेका छन् । सख्यात्मक हिसावले त यो उधुमनै हो नी ! यहाँ २–४ वटा गित गाउँदा म त खतरै गायक हुँ, ववालै गायीका हुँ भन्ने देृखिन्छन् । हामी यो केहि भनिन्न । ठुला गफ दिएर अरुलाई २ मिनेटको प्रसंसा वटुल्नु पनि छैन । जे गरिएको छ ति सवै दर्शक तथा स्रोताले सुनेको छन् । हेरेका छन् । अनि वुझेका छन् ।
४) अहिले कामको फुर्सद छैन । मार्केटमा कार्कीजी भनेर चिनिएको छ । यसो र्याप हान्दिनुस् न भन्दै फोन आउँदा विगत सम्झन्छु । अनि कुनैवेला व्यस्त कलाकार हुन पाए कस्तो हुँदोहो भनेर सोचेको पहिला खुड्कीला सम्झन्छु । दिनदिनै कामको फोन आएपनि सकेसम्म समय दिएर काम गर्ने गरेको छु । गितसंगितमा व्यस्त हुँदा मनमा खुसी लाग्छ ।
५) जिन्दगीमा सपनाहरु त एकपछि अर्को जन्मिने रहेछन् । कुनैवेला गायक हुन मन थियो त्यसपछि व्यस्त कलाकार हुन मन लाग्यो । अलिकति नाम र काम पाएपछि फेरी अहिले अर्को सपना छ, नेपालको चर्चित र्यापर हुन पाए कस्तो हुँदोहो ? आशा छ त्यो सपना पनि चाडैं पुरा हुनेछ ।